Visuals bụ ihe dị mkpa nke ọdịnaya ahịa ọ bụla. Foto, eserese, akara ngosi - ha niile na-anọchite anya akara gị site na atụmanya mbido atụtụ aka na webụsaịtị gị na akwụkwọ akụkọ ndị ahịa gị. Mgbe ị na-arụ ọrụ na imepụta ozi ịntanetị ndị ọzọ na-adọrọ mmasị, ozi blọọgụ na-enye ihe ọmụma, yana ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ịkwesighi ichegbu onwe gị ebe ị ga-achọta onyonyo dị mma iji. Ekwela ka ihe nlere gi bu ihe nkpuchi iji nweta ọdịnaya di nma
Dị ka ndị na-ere ahịa, anyị na-emeso ọtụtụ ngwaọrụ na ngwa kwa ụbọchị. Site na ahia akpaaka na nsuso ahia rue ahia email, anyi choro ihe ndi a iji mee oru anyi nke oma ma jikwaa / soro uzo mgbasa di iche iche anyi tinye. Agbanyeghị, otu akụkụ nke teknụzụ azụmaahịa azụmaahịa nke ana eleghara mgbe ụfọdụ bụ otu anyị si ejikwa faịlụ anyị, gụnyere mgbasa ozi, onyonyo, ederede, vidiyo na ndị ọzọ. Ka anyị chee ya ihu; ị nwere ike ọ bụghị naanị inwe